स्कुटरमा सरर भाईरल जोडी बखत र प्रतिभा (हेर्नुहोस् भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
स्कुटरमा सरर भाईरल जोडी बखत र प्रतिभा (हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौं । प्रेम पनि अचम्म कै हुन्छ। प्रेमले मानिसलाई हरेक कुरा सम्भब छ भनेर प्रष्ट्याई दिन्छ। हामीले यो संसारमा यस्तो हुदै छ रे भन्ने त धेरै सुनेको छौ तर यी आखाँले पनि धेरै कुरा देखेको पनि छौं।
एउटा यस्तो अचम्मको जोडी, बच्चा भन्दा पनि सानो श्रीमान् भएका जोडी भेटिएका छन्। बखत विष्ट र प्रतिभा चौधरी प्रेममा छँदा पत्याउने सायदै हुन्थे। तर बखतले प्रतिमालाई मन मात्रै पराएनन् भागएर काठमाण्डौ ल्याए बखतले प्रतिभालाई। अव यि जोडी चाडै विवाह पनि गर्दैछन् । यि जोडी काठमाण्डौ मा सरर स्कुटरमा हिंडेको भेटिए।